रोचक Archives - E mechi
मेगन बार्टनको रातो पहिरनले सबथोक सम्हाल्न सकेन, फोटोहरुले इन्टरनेटमा सनसनी मच्चाए
काठमाडौं। बेलायती टेलिभिजन रियालिटी शो लभ आइल्याण्डकी २४ वर्षीय मेगन बार्टन हानसन ‘एक्ट्रिमली विक्ड, सकिङ्ग्ली एभिल एण्ड भाइल’ नाम ड्रामा सिरिजको प्रिमियरमा आफ्नो बोल्ड अवतारमा देखा परेकी छिन् । बुधबार लण्डनमा आयोजित प्रिमियरमा उनी स्किनटाइट रातो कपडामा देखा परेकी हुन् । उनले लगाएका कपडा सम्हाल्न समेत उनलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । यसकारण उनले आफ्नो पहिरन बेलाबेला मिलाइरहनु परेको थियो । पहिरन मिलाउने क्रममा प्रिमियर कार्यक्रममा आफ्नो वक्षस्थल दुई हातले छोपेपछि प्रिमियरमा उपस्थित सबैको ध्यान उनी तर्फ आकर्षित भएको डेलीमेलले जनाएको छ । यसअघि प्लाष्टिक सर्जरी गरेर राम्री बनेको भन्दै आलोचनाको शिकार भएकी उनले पछिल्लो समय प्लाष्टिक सर्जरीले आफूलाई अझ खुशी बनाएको बताउँदै आएकी छिन् ।
काठमाडौँ,४ मंसिर । राशीले हरेक व्यक्तिको जीवनलाई प्राभाव पार्ने गर्छ । प्रत्येक व्यक्तिको फरक फरक राशी रहेको हुन्छ भने ती राशीहरुले छुट्टै परिणाम दिने गर्छ । त्यस्तै राशी अनुसार ब्यक्तिको स्वाभाव पनि छुट्टै छुट्टै रहेको हुन्छ । आज हामी तपाईहरुलाई ज्योतिष शास्त्रले बताएअनुसार रिसाउने मामलामा आगाडी रहेका केही राशीहरुको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । मेष राशि : हतपत नरिसाउने यो राशीका मानिसहरु रिसाउन पर्यो भने निकै क्रोधित हुने गर्छन् । यी राशी भएका व्यक्तिहरुको रिस कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो अपमान भएको अवस्थामा यी मानिसहरु हिंस्रक बन्ने गर्छन् । सिंह राशि : यो राशी भएका व्यक्तिहरु धेरै रिसाउने भएकाले रिस उठेको बेलामा एक्लै बस्न चाहन्छन् । छिट्टै रिसाउने भएकाले यो राशी हुनेहरु मजाक गरेको मन पराउँदैनन् । धनु राशि : यो राशी भएका व्यक्तिहरु वास्तबिक रुपमा नै क्रोधित हुने गर्छ
भाउजुलाई नन्दले लेखिन यस्तो पत्र जसले तपाइँको मन पनि हुने छ चसक्क हेर्नुहोस र सेयर गर्नुहोस
प्यारी भाउजु ! मेरो सभ्यताले तपाईं सम्बोधन गर्नु पर्छ मैले तर आत्मियताले मैले तिमी सम्बोधन गर्दैछु तिमी यसलाई अनादर नसम्झिनु है ! भोलिबाट तिमी हाम्रो घरकी स्थाई सदस्यको रुपमा प्रबेश गर्दैछौ ।म जहाँ जन्मेर हुर्के आज सम्म मेरो हो भनेर दाबी गरिरहेकी छु त्यो घर मेरो हैन तिम्रो हुनेछ । मैले हिलो खेलेर हुर्केको माटो तिम्रो हुनेछ । मैले गट्टी खेलेको प्रत्येक ढुङगाहरु अब तिम्रो हुनेछ । आज सम्म मैले मेरो भनेर जे जे सजाए, आफ्नो भागमा राखे त्यो सबै सबै तिम्रो हुनेछ र म यो सबै सबै तिमिलाई सुम्पिन चाहन्छु । छोरी भएर मैले जे जे पाए, पाईरहेकि छु र छोरी हुनुको हक त्यो पनि सबै दिन चाहन्छु तर तिमिले पनि आफूले एउटा छोरी हुनुको कर्तब्य निभाउनु पर्छ । हामीमा केहि फरक छैन आज तिमी मेरो घरमा जसरी आइरहेकी छौ । आफ्नो बाकी जिन्दगीको हिस्सा यहि बिताउछु भनेर भोलि म पनि त्येसरी नै जानेछु अर्काको घरमा आफ्नो बाकी जिन्
Apr202019 by News Desk SectionNo Comments
तामाको भाँडामा राखेको पानी पिउदा यी २० रोग निको हुन्छ , थाहा पाउनुहोस् यस्ता छन् बैज्ञानिक कारण
एजेन्सी । हिन्दु परम्परा अनुसार तामालाई पवित्र धातु मानिन्छ र वैदिक कार्यहरुमा तामाको भाँडालाई अनिवार्य मानिन्छ । दैनिक जिवनमा समेत तामाको गाग्रीमा राखेको पानी पिउनु उत्तम मानिन्छ र गाउँघरतिर तामाकै गाग्रीमा पानी भरेर राखिन्छ अझैपनि । यद्यपि सहरतिर पनि तामाको भाँडाको प्रयोग नभएको होइन । धार्मिक हिसाबले मात्र होइन वैज्ञानिक अध्ययनहरुले समेत तामाको भाँडामा राखेको पानी पिउनु स्वास्थ्यका हिसाबले निकै फाइदाजनक रहेको देखाएका छन् । आयुर्वेदका अनुसार तामाको भाँडामा राखेको पानी पिउँदा विभिन्न खाले रोगबाट बँच्न सकिन्छ । हरेक बिहान तामाको भाँडामा राखेको पानी पिउनुका फाइदा यस्ता छन्ः आयुर्वेदका अनुसार तामाको भाँडामा पानी खानाले तीनैवटा दोष (वात, कफ र पित्त) लाई सन्तुलित पार्ने क्षमता हुन्छ । तामाको भाँडामा राखिएको पानीलाई ‘ताम्रजल’ भनिन्छ । यसका लागि तामाको भाँडामा कम्तीमा ८ घण्टा राख्नुपर्छ । तामा
७ वटा बार मध्ये कुन बार जन्मिएका मान्छे ले कति धन कमाउछन् ? कति सफल हुन्छन ? हेर्नुहोस आफ्नो भाग्यपरिक्षा
आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव सबै भन्दा बढी हुन्छ । शनिवारको कारक ग्रह शनि मानिन्छ । ज्योतिषका अनुसार जुन बार जन्मियो त्यो बारको ग्रहको प्रभाव जीवनका सबै पाटामा पर्छ । मान्छेको स्वभाव र भाग्य समेत जन्मबारले निर्धारण गर्ने ज्योतिष शास्त्रीको दावी छ । कस्तो हुन्छ कुन बार जन्मिनको मान्छेको स्वभाव र भाग्य थाहा पाउनुस् । आइतबारः पुरुष आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ । स्त्री आइतबार जन्मिने स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं च
आजकलको जमानामा कपडामा प्रेस अर्थात आइरन नलगाउने मानिस सायदै होलान । हामीलाई चिटिक्क देखाउनको लागि पनि हाम्रो कपडामा आइरन लगाउनु नितान्त आवश्यक हुन्छ । आइरन नलगाएको कपडा कच्याककुचुक र खुम्चेको हुन्छ । जसले गर्दा कपडा नयाँ भए पनि त्यो कपडा लगाउने व्यक्तिको व्यक्तित्वमा सिधै असर गरिरहेको हुन्छ । तर कहिले काहीं हामीले प्रयोग गर्ने आइरनको तल्लो भाग अर्थात मेटलको भागमा कालो दाग बस्ने गर्छ । जसले गर्दा आइरन गर्ने समयमा उक्त आइरनको कालो दाग हाम्रो कपडामा समेत लाग्न गई कपडा बिग्रिने सम्भावना निकै धेरै हुन्छ । आइरनमा लागेको दागलाई सजिलै हटाउने उपाय यस्तो छ । तरिका नम्बर १ खाने सोडा र पानी एक चम्चा पानीमा २ चम्चा खाने सोडा हालेर पेस्ट(लेदो) बनाउनुहोस । तयार पारिएको लेदो/पेस्टलाई आइरनको प्लेटको दाग लागेको ठाउमा दल्नुहोस । पेस्ट दले पछी सफा कपडा पानीमा डुबाएर पेस्टलाई पुछ्नुहो
एक सुन्दर जोडि थिए ! केटा र केटि धेरै बर्ष माया प्रेम बसे पछि विवाह गर्छन , विवाह पछि त झन माया प्रेम पनि धेरै बड्दै जान्छ,दुबै जना धेरै नै खुशि र एक सुखि परिवारका साथ रमाउदै जिवन निर्वाह गरि रहेका हुन्छन। बिहान बेलुका श्रीमती पुजा पाठ गर्न गरेर सधै आफ्नो पतिको लामो आयु होश भनि भगवानसग प्रार्थना गर्थिन। अनि श्रीमान भने दिन भरि काम गरेर आउथे , दिन भरि मजदुरी गरेर एक नया जिबनको नया सुरुवात श्रीमतीलाई खुशि राख्ने पतिको सोच थियो। एकदिन बिहानै केटा काममा जान्छ।तर बेलुका साझ परिसक्दा पनि फर्कदैन। श्रीमान घर नफर्के पछि केटि धेरै आत्तिन्छिन,धेरै पल्ट फोन try गर्छिन तर मोबाईल Switch Off हुन्छ , रात भरि आफ्नो श्रीमान आउने आशामा ढोकामा बसेर कुरी रहन्छिन , भोलीपल्ट बिहानको7बजे पछि केटा घर आउछ, तब श्रीमतीलाई उसले ढोकामै देख्छ।अनि श्रीमानले भन्छः किन रुदै ढोकामा बसेकि नि, आऊ उठ भित्र जाऊ ,
यी महिलालाई हरेक २/२ घन्टामा चरम यौन उत्तेजना जागेर जिउन कठिन भएपछि (भिडियो सहित)
डेलिमेलका अनुसार Arizona मा बस्ने ३० बर्षीय एक महिला Cara Anaya-Carlis लाई लगातार छ घन्टा सम्म चरम यौन उत्तेजनाको आभास हुन्छ भने कहिले दुइ घन्टा मा १८० पटक सम्म चरम यौन उत्तेजना को आभास हुन्छ । Cara Anaya-Carlis को आमाको अनुसार उनलाई १० वर्षको उमेरमा भएको एक दुर्लभ रोगको कारण एस्तो भएको बताएकी छन। जसको कारण उनको जिवन नर्क भएको छ किनकि एस्तो मनोविकृतिको कारण घर देखि बाहिर जान पनि सम्भव छैन घर मै बस्न बाध्य छिन् र कुनै नोकरी पेसा पनि गर्न सक्दैनिन् । Cara लाई पहिलो पटक एक सुपर मार्केटमा गएको बेला र स्कुलको दौड प्रतियोगितामा भाग लिदै गर्दा अचानक यौनांगमा असम्भाभित यौन उत्त्जेना महसुस भएको थियो ।उनको एक छोरा र श्रीमानको साथमा एक अलगै स्थानमा रहन्छिन कतै भिडभाडमा जानु उनको लागि निकै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था भएको कारणले उनि घरमै बस्न बाध्य छिन् पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाल कम्न
यौन सम्पर्कपछि महिलाले सोच्ने १२ कुराहरु जुन तपाई सुनेर अचम्मित पर्नुहुनेछ ,,,
यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । प्रायः महिलाहरू आफ्नो पार्टनरसँग मात्र यौनसम्पर्क राख्न रुचाउँछन् । यौन सम्बन्धले महिला र पुरुषविचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउँछ भनिन्छ, तर कतिपयको भने यौनसम्पर्क पछिको सम्बन्धमा विचलन भएको पनि पाइन्छ । यौनसम्पर्कपछि महिलाहरूले आफ्नो पुरुष साथी र आफूबारे कस्ता कुराहरू सोच्न सक्छन् ? हेर्नुहोस् यौनसम्पर्क पछि महिलाहरूले सोच्ने १२ कुराहरू : १. आनन्द र सन्तुष्टीबीच फरक किंसले इन्स्टिच्यूटले गरेको शोधमा महिलाले पनि पुरुष जस्तै कण्डम नलगाइ यौन सम्पर्क गर्दा बढी सन्तुष्टी हुने बताए । यद्यपी कण्डम लगाउँदा बढी सुरक्षित महसुस हुने उनीहरुको भनाइ थियो । २. विस्तारै गरेको राम्रोयौन क्रिडाका लागि हतारिने पुरुष महिलालाई मन पर्दैन । उनीहरु आफ्ना संवेदनशील कोमल अंगमा पुरुषले दुख्ने गरी केही पनि नगरुन् भन्ने चाहन्छन् । संवेदनशील अ
अति नै मार्मिक कथा मन थामेर नरोई पढ्नुहोला
एक सुन्दर जोडि थिए ! केटा र केटि धेरै बर्ष माया प्रेम बसे पछि विवाह गर्छन , विवाह पछि त झन माया प्रेम पनि धेरै बड्दै जान्छ,दुबै जना धेरै नै खुशि र एक सुखि परिवारका साथ रमाउदै जिवन निर्वाह गरि रहेका हुन्छन। बिहान बेलुका श्रीमती पुजा पाठ गर्न गरेर सधै आफ्नो पतिको लामो आयु होश भनि भगवानसग प्रार्थना गर्थिन। अनि श्रीमान भने दिन भरि काम गरेर आउथे , दिन भरि मजदुरी गरेर एक नया जिबनको नया सुरुवात श्रीमतीलाई खुशि राख्ने पतिको सोच थियो। एकदिन बिहानै केटा काममा जान्छ।तर बेलुका साझ परिसक्दा पनि फर्कदैन। श्रीमान घर नफर्के पछि केटि धेरै आत्तिन्छिन,धेरै पल्ट फोन try गर्छिन तर मोबाईल Switch Off हुन्छ , रात भरि आफ्नो श्रीमान आउने आशामा ढोकामा बसेर कुरी रहन्छिन , भोलीपल्ट बिहानको7बजे पछि केटा घर आउछ, तब श्रीमतीलाई उसले ढोकामै देख्छ।अनि श्रीमानले भन्छः किन रुदै ढोकामा बसेकि नि, आऊ उ